LG G3 | နှင့်စခရင်ရိုက်ကူးရန်နည်းလမ်းနှစ်ခု Androidsis
Manuel Ramirez | | LG, လဲ tutorial
Screenshots များသည်အကြောင်းအရာများကို WhatsApp (သို့) လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်မျှဝေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေသည့်အရာများကိုပေးပို့နိုင်ခြင်းမှဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်ခဲ့သောမှတ်တမ်းကိုသိမ်းထားရန် သူတို့ကိုငါတို့သူငယ်ချင်းများကိုပြပြီးသူတို့လက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်သားပြင်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပျက်သောအရာအရေအတွက်နှင့်အတူဤအရာများမှဖမ်းယူခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Android စမတ်ဖုန်းအများစုအတွက်စခရင်ရိုက်ကူးပါ အသံအတိုးအကျယ်လျော့ချသော့နှင့်ပါဝါကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရရှိနိုင်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ သင့်တွင် Samsung ဖုန်းရှိပါကအသံအတိုးအကျယ်ကို နှိပ်၍ အိမ်သို့ နှိပ်၍ ဤအရာသည်ဤနေရာတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ LG G3 မှာ ခလုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းမှာ volume down and power နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ကျောတွင်ရှိသောခလုတ်များရှိခြင်းဖြင့် Samsung သည်ဖန်သားပြင်များကိုယူရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။
ဤဒုတိယနည်းလမ်းသည် screenshot ရိုက်ယူနိုင်သည် LG G3 မှာ QuickMemo + application နဲ့ပါကျနော်တို့အောက်ကရှင်းပြထားတဲ့။
1 Hard keys နှင့်အတူ Screenshot
2 QuickMemo + သုံး၍ Screenshot
Hard keys နှင့်အတူ Screenshot
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း LG G3 ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့်အတူ screenshot ယူရန်တစ်ချိန်တည်းမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်သည်။ ပါဝါနှင့် volume ကိုနှစ် ဦး စလုံး။ အစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ထူးဆန်းနေသော်လည်းလုပ်ဆောင်မှုသည်ဖန်သားပြင်ရိုက်ကူးခြင်း၏ animation အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
QuickMemo + သုံး၍ Screenshot
ဖော်ပြပါသော့နည်းလမ်းများရှိခြင်းအပြင်၊ G3 တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုယူရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးသည် QuickMemo + အက်ပ်တွင်ရွေးစရာတစ်ခုသုံးနိုင်သည်.
Android 4.2 ကို သုံး၍ မည်သည့် terminal ပေါ်ရှိ home ခလုတ်မှ Google Now ကိုမဆိုစတင်နိုင်သည် သင် နှိပ်၍ ကိုင်ထားသည့်အခါပေါ်လာသည့်လက်စွပ်တွင် QuickMemo + ကိုရွေးချယ်ပါ အိမ်မှာစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာသင် QuickMemo + ကိုရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာမျက်နှာပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်လိမ့်မည်။ ဤတွင်သင်သည်သင်၏ပုံပြခန်းတွင်ဆွဲယူနိုင်သည်၊ မှတ်ချက်များပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သိမ်းနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 နှင့်မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်း
home ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ring ကိုရရှိသည်။ သို့သော် google search မျက်နှာပြင်သည်တိုက်ရိုက်ဖွင့်သည်။ ထို့ကြောင့် quick memo ကိုဖွင့်သောအခါ screen ၏ screenshot သည်ငါရိုက်ချင်သည့်အရာမှမဟုတ်ဘဲ google မှပြုလုပ်သည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲပြောပြနိုင်မလား?
Quick Memo ကိုဖွင့်ပြီးမှသာဖန်သားပြင်များကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ပုံတွင်သင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်ဖမ်းယူလိုသည့်သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ထားသို့၎င်းတို့ကိုပြခန်းတွင်သိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်
lg bell ကိုကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းထဲသို့မည်သို့ဒေါင်းရမည်နည်း
ဒီနွေရာသီအားလပ်ရက်မှာပျော်မွေ့ရန် Android ဂိမ်းငါးခု
Paranoid Android ဗားရှင်း ၄.၅ Alpha 4.5 ကိုမကြာသေးမီက Android L တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းခဲ့သည်